Real Racing37.4.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.4.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Real Racing 3
Real Racing3၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Real Racing3ကိုမိုဘိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်းအသစ်တစ်ခုစံသတ်မှတ်သောဆုရဂိမ်းဖြစ်ပါသည် - သင်ကယုံကြည်ဖို့ကကစားရန်ရှိသည်။
ဒီ app in-app ဝယ်ယူမှုပေးထားပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ device ကို setting များကို အသုံးပြု. In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ဖြစ်နိုင်တယ်။
သန်း 200 ကျော် Downloads!
TabbyAwards 2014 - WINNER: အကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှု, စွန့်စားမှု, Arcade & ပြိုင်ပွဲဂိမ်း
မိုဘိုင်း Excellence Awards ဆုပေးပွဲ - WINNER: အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းကို 2013
ဂိမ်း Connect ကိုအာရှပစိဖိတ် - WINNER: အဆိုပါတစ်နှစ်တာ 2013 ခုနှစ်ဂိမ်း, နည်းပညာ Excellence, Excellence အနုပညာအတွက်
Meffy ဆုပေးပွဲ - ဆန်ကာတင်: အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းကို 2013
Real Racing3ကို 39 17 အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနေရာများမှာဆားကစ်, 43-ကားတစ်စီးဇယားကွက်နှင့်ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများထံမှ 140 ကျော်စေ့စပ်အသေးစိတ်ကားများနှင့်အတူတရားဝင်လိုင်စင်ရပုဒ်တစ်ခုအစဉ်အဆက်-တိုးချဲ့တန်းစီဇယားပါရှိပါတယ်။ Plus အားအချိန်နှင့်တပြေးညီကစားသူအများအပြား, လူမှုရေးခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များ, အချိန်စမ်းသပ်မှုညဉ့်အခါပြိုင်ကားများနှင့်ဆန်းသစ်သောအချိန်အချိန်မရွေး, ဘယ်နေရာမှာမဆို, သင်မည်သူမဆို Race ခွင့်အများအပြား™ (TSM) နည်းပညာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။
** ဤသည်အလွန်မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုပုံရိပ်ယောင် featuring တဲ့ resource-intensive ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်နေရာလွတ်အနည်းဆုံး 1.5GB ရှိသေချာပါစေ။ **
Real Racing3ချီးမွမ်းခြင်း
(IGN, 9.1 / 10, အယ်ဒီတာ့ရွေးချယ်မှု) "ရှေ့ဆက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အပြည့်အဝမျိုးဆက်ခံစားရ"
"မိုဘိုင်းအပေါ်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်အာရုံလက်ရာ" (Touch ကို Arcade)
(Pocket ဂိမ်းကစားသူ, 9/10, Gold Award) "ပြိုင်ကားဂိမ်းအဘို့အမိုဘိုင်းပေါ်တွင်အသစ်ကစံစေ '
Ford ကား, Ferrari ပြိုင်ကား, Lamborghini က, Aston Martin နဲ့ Mercedes-Benz များကဲ့သို့အထင်ကရထုတ်လုပ်သူများထံမှ 140 ကျော်အပြင်းအထန်အသေးစိတ်ယာဉ်များ၏ဘီးကို ယူ. တစ်ဦးစစ်မှန် 43-ကားတစ်စီးပြိုင်ပွဲဇယားကွက်ပေါ်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ရန် - ဆိုလက်ကိုင်အပေါ်အများဆုံးမော်ကွန်းပြိုင်ကားအတွေ့အကြုံကို။
Silverstone, Hockenheimring, Le Mans, ဒူဘိုင်း Autodrome နှင့်များစွာသောပိုပြီးအပါအဝင်ထိပ်တန်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနေရာများမှမျိုးစုံ configurations 17 အစစ်အမှန်ပုဒ်၏အပြည့်အဝ lineup အပေါ်ရော်ဘာမီးရှို့ရမည်။
မူကြမ်းရေးဆွဲနဲ့အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 8-player ကို Cross-Platform ကို real-time ပြိုင်ကားများတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ဘန်ပါမှဘန်ပါသွားပါ။ ဒါမှမဟုတ်အချိန်-ပြောင်းရွှေ့ကစားသူအများအပြား™မှာသူတို့ရဲ့ AI အ-controlled ဗားရှင်းစိန်ခေါ်ဖို့မည်သည့်လူမျိုးသို့ drop ။
ဖလားပြိုင်ပွဲ, ပပျောက်ရေးနှင့်ခံနိုငျရညျစိန်ခေါ်မှုများအပါအဝင် 4000 ကျော်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ သင့်ကားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့အဆင့်မြှင့်၏ကျယ်ပြန့ထံမှရွေးချယ်ပါ။ သုတ်ဆေး, ဗီနိုင်းနှင့်ဘီးဝန်း၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းနှင့်သင်၏ကားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ ကင်မရာကိုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေအရေးယူ View, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုရန် HUD နှင့်ဒဏ်ငွေ-ညှိထိန်းချုပ်မှု tweaks ။
ပရီးမီးယားလိဂ် Race အတွေ့အကြုံ
ထူးခြားအံ့ဖွယ် Mint, ™3Engine ကို, Real Racing3features တွေအသေးစိတ်ကားတစ်စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အပြည့်အဝလည်ပတ်နောက်ဘက်အမြင်မှန်များနှင့်အမှန်တကယ် HD ကိုပြိုင်ကားများအတွက်ပြောင်းလဲနေသောထင်ဟပ်ခြင်းဖြင့် Powered ။ အစဉ်အဆက်အများဆုံးအဆင့်မြင့် Cross-platform လူမှုရေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ပြိုင်ကားအသိုင်းအဝုိင်းနဲ့ကြွယ်ဝသော, မျိုးဆက်သစ်ဂိမ်းခံစားပါ။ Real Racing3ကိုကအားလုံးကိုကယ်တင်နှင့်တိုင်း update ကိုအတူနယ်နိမိတ်တွန်း။
အကူအညီများသို့မဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့အ https://help.ea.com/ သွားရောက်ကြည့်ရှု။
ရက်ပေါင်း 30 '' အသိပေးစာ www.ea.com/1/service-updates အပေါ် posted ပြီးနောက် EA ၏အွန်လိုင်း features တွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအနားယူစေခြင်းငှါ
အရေးကြီးစားသုံးသူပြန်ကြားရေး: (ကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) တစ်ဦး persistent အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ပါတယ်; EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။
In-ဂိမ်းကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်; (အသေးစိတ်ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီကိုကြည့်ပါ) တတိယပါတီ analytics နည်းပညာမှတဆင့်ဒေတာစုဆောင်း; 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။
Real Racing3အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Real Racing3အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Real Racing3အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Real Racing3အား အခ်က္ျပပါ
fcukfac စတိုး 42 86.12k
Real Racing3ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Real Racing3အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.4.0
ထုတ်လုပ်သူ Electronic Arts Inc
File Size: 30.44MB
Release date: 2019-07-03 06:22:18
Real Racing3APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ